आईपी ​​ठेगाना 192.168.8.1 बिभिन्न प्रणालीको साथ व्यक्तिगत नेटवर्कमा पत्राचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो पनि नेटवर्क उपकरणहरू रूपरेखा गर्न लगइन प्रक्रिया सुरू गर्दा प्रयोग गरिन्छ। .192.168.8.1 २.१.XNUMX..XNUMX.१ को पहुँच गर्न आईपीलाई तपाईंको वेब ब्राउजरको ठेगाना पट्टीमा राख्नुहोस् वा तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
192.168.8.1 लगइन प्रशासन
जबकि यो एक व्यक्तिगत नेटवर्क हो, यसको मतलब यो एकै साथ विभिन्न नेटवर्कमा क्रमबद्धमा पूर्व स्वामित्वको हुन सक्छ। पीसीहरू जुन नेटवर्क जडान छैन प्रत्येक र हरेक इन्टरनेट TCP वा IP प्रोटोकल अनुरूप हुनु पर्छ।
192.168.8.1 को लागी लगइनहरू
कसरी 192.168.8.1 मा लगईन गर्ने?
IP ठेगाना महत्वपूर्ण छ जब तपाईं आफ्नो राउटरमा लग ईन गर्न चाहानुहुन्छ। पहिलो चरण भनेको केहि वेब ब्राउजरहरू पहुँच गर्नु हो र प्रविष्ट गर्नुहोस् https://192.168.8.1 ब्राउजर यूआरएल बक्समा लिंक अब 'मा थिच्नुहोस्प्रविष्ट गर्नुहोस् कुञ्जी।
नयाँ विन्डो खुल्छ जुन तपाईलाई आईडी लगइन गर्न आग्रह गर्दछ। तपाईं तब राउटर ईन्टरफेसमा प्रवेश प्राप्त गर्न पूर्वनिर्धारित लगइन डिप्लोमा प्रयोग गर्नुहुनेछ।
लगइन विधि फलिफाप भएपछि, तपाईंलाई राउटरको गृहपृष्ठमा लगिनेछ। व्यवस्थापक प्यानलमा तपाईले आफ्नो नेटवर्क र सुरक्षा भविष्यवाणीहरू मिलाउन धेरै सेटि settingsहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको राउटर आईपी ठेगाना बिभिन्न गर्न सिफारिश गरिदैन यदि एक शिक्षित पेशेवर द्वारा गरीन्छ।
बिर्सनुभयो आईपी प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड ठेगाना?
म्यानुअल जाँच गर्दै
यदि तपाईंले १ 192.168.8.1 २.१XNUMX..XNUMX.१ प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बिर्सनुभयो भने तपाईं राउटरको लागि म्यानुअल / बक्स खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं हाम्रो राउटर डिफल्ट प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डहरूको सूची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ।
राउटर रिसेट गर्दै
यदि तपाइँले पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्तानाम / पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभयो र यसलाई बिर्सनुभयो भने, पहुँच पुन: भण्डार गर्ने एक मात्र तरिका भनेको राउटरलाई पूर्वनिर्धारित कन्फिगरेसनमा रिसेट गर्नु हो, जसले सबै परिवर्तनहरूलाई पूर्वनिर्धारित सेटि toहरूमा फर्काउँछ। तपाईंको राउटर रिसेट गर्न:
सुई वा कागज क्लिप जस्ता एउटा सूचक वस्तु लिनुहोस्, र तपाईंको राउटरको पछाडि रिसेट बटन खोज्नुहोस्।
तपाईंले एउटा सानो गोप्य बटन फेला पार्नुहुनेछ। लगभग १०-१-10 सेकेन्डका लागि पोइन्टि भन्ने वस्तुको साथ बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्।
यसले सबै परिवर्तनहरू पूर्वावस्थामा ल्याउँदछ जुन फेरि परिवर्तन गरिएको थियो मूल नाममा, प्रयोगकर्तानाम / पासवर्ड सहित तपाईले परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईं त्यसपछि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको पूर्वनिर्धारित लगइन प्रमाणहरू प्रयोग गरेर।
IP ठेगाना समस्या निवारण 192.168.8.1
केहि चरणमा तपाईको राउटरको साथ बिभिन्न समस्याहरुको सामना गर्न यो सामान्य छ। यदि तपाईं लगइन स्क्रिनमा जान सक्नुहुन्न भने, तपाईंले केहि चीजहरू याद गर्नु आवश्यक छ। प्रमाणित गर्नुहोस् कि इन्टरनेट स्थिर रहन्छ र उतार-चढाव हुँदैन। अर्को विकल्प पूर्वनिर्धारित गेटवे निर्णय गर्न प्रम्प्ट कमाण्ड प्रयोग गर्नु हो। गलत आईपी ठेगाना तपाईले इन्टरफेस पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। थप सहयोगका लागि तपाईं इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
'192.168.8.1'एक सुनसान आईपी ठेगाना हो। यो उदाहरणका लागि प्रसिद्ध आईपी ठेगाना हो '१ 192.168.0.1 २.१198.168.0.1.०.१' र '१2192.168.8.1१.XNUMX.०.१' किनकि योसँग त्यस्तै प्रकार्य छ किनकि बाँकी २ को अझै भिन्नता भनेको 'XNUMX २ XNUMX .१.XNUMX..XNUMX.१' एक द्वारा प्रयोग गरिएको छैन राउटर कम्पनीहरूको अधिकतम। फर्महरू जस्तै MediaLink, Huawei ले यो शुद्ध प्रोटोकोल ठेगाना प्रयोग गर्दछ।
तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि सबै राउटरहरूले २ विविध प्रकारका आईपी ठेगानाहरू समावेश गर्दछ। स्थानीय नेटवर्कमा सोर्स गरिएको आईपी ठेगाना लाईन आईपी ठेगाना भनिन्छ र बाँकी मोडेमले WAN IP ठेगाना भनिन्छ। आईपी ​​ठेगाना '१ .2 २.१192.168.8.1..XNUMX.१' सामान्यतया राउटरको प्रकार्यहरू पहुँच गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो व्यक्तिगत आईपी ठेगाना नेटवर्क उपकरण को कन्फिगरेसन को लागी प्रयोग गरीन्छ।
सुरुमा कसरी राउटरको आईपी ठेगाना पत्ता लगाउने।
सर्वप्रथम, तपाईंको राउटर पीसी वा अन्य कुनै उपकरणमा लिंक गर्नुहोस्। तपाइँले जान्नुपर्दछ कि राउटर प्रशासक प्यानल खोल्नको लागि तपाइँले राउटरसँग लि link्क गर्न आवश्यक छ। र तपाईंलाई यसको लागि कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेट जडानको आवश्यक छैन।
त्यसो भए, तपाईले आफ्नो राउटरको आईपी ठेगानाको साथ प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईले राउटरको आईपी ठेगाना लैपटपमा कमाण्ड प्रम्प्टमा गएर चिन्न सक्नुहुन्छ।
192.168.8.1 IP ठेगाना भ्रमण गर्न बिभिन्न विधि
तपाईले राउटरको आईपी ठेगाना कुनै पनि समयमा २ विधिहरुमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै निश्चित सेटअप सीडी खोलेर वेब इन्टरफेसको प्रयोग गरेर। यो हामी मध्ये अधिकांशका लागि आवश्यक छ किनकि धेरै ग्राहकहरू यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् कि कुनै पनि अन्य यन्त्र ठेगानाको साथ कुनै पनि १2२.१192.168.8...l ठेगाना द्वन्द्व छैन। यदि कोहीले उनीहरूको भर्खरको आईपी ठेगाना बिर्सछ भने, उसले राउटर रिसेट गर्न सक्दछ र सम्पूर्ण कुरा पूर्वनिर्धारितमा पुनः सुरु हुनेछ। थप रूपमा, जो कोहीले पनि उनको / उनको आईपी ठेगाना ट्रेस गर्न सक्दछ केवल Google खोज स्थानमा "मेरो आईपी" खोजी गरेर। निश्चित रूपमा, यो तपाइँको सेयर गरिएको आईपी ठेगानामा फिर्ता जान्छ।
यस समयमा तपाईंको डिफल्ट ब्राउजर वा केहि फरक ब्राउजरमा जानुहोस् र त्यसपछि ठेगाना बार आईपीमा प्रविष्ट गर्नुहोस् https://192.168.8.1 ब्राउजरको ठेगाना स्थानमा। यसले तपाइँलाई एक विशेष साइटमा मार्गदर्शन गर्दछ र तपाइँले राउटर प्रशासक प्यानलमा लगइन गर्न प्रवेश प्राप्त गर्दछ।
यहाँ, तपाईले आफ्नो राउटरको प्रशासनिक प्यानल प्रविष्ट गर्न तपाईको राउटरको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड लेख्नु पर्छ जुन मार्फत तपाईले असंख्य विकल्पहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रोक्सी, सुरक्षा विकल्पहरू, नेटवर्क प्रबन्धन, WLAN सेटिंग्स, राउटर सफ्टवेयर र अधिक।
यदि तपाइँ प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड राउटरलाई के गर्ने छैन भने के गर्ने?
धेरै व्यक्तिहरु आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड सम्झन सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ उनीहरूलाई बुझाउनेहरूको लागि व्याख्या छ जुन उनीहरूको प्रदर्शनमा डगमगर गरिएको थियो राउटरको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड.
त्यहाँ एक केस हुनसक्दछ जुन तपाईं प्रयोगकर्तानाम र पासकीहरू सम्झनुहोस्। यस्तो अवस्थामा, तपाइँले राउटरको ब्रान्डमा राउटरको श्रृंखला नम्बर र लगईन ठेगानाको साथ यसको लागि खोजी गर्नुपर्नेछ।
अर्को केस हुन सक्छ कि तपाईं आफ्नो पासकी सम्झन असफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईले राउटरको सेटिंग्स रिसेट गर्नु पर्छ गुप्त रासेट कुञ्जी संग।
अर्को केस हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो राउटरको लग ईन प्रमाण पत्रलाई कहिलै पनि बदल्नु भएन जुन तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ राउटरको पूर्वनिर्धारित लगइन नेटमा आईडीहरू।
अब यदि तपाइँ राउटरको लगईन विवरणहरूको बारेमा सचेत हुनुहुन्छ भने, तपाइँ वेब पृष्ठमा तपाइँको राउटरको आईडीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाइँ राउटर प्रशासक प्यानलमा उपलब्ध हुनुहुन्छ।
तपाईले राउटरलाई वेबमा आधारित सेटअप होमपेजसँग रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्त्यमा, तपाईंले यसका बारे धेरै बिन्दुहरू निर्दिष्ट गर्नुभयो 192.168.8.1 इन्टर्नेट प्रोटोकोल ठेगाना। त्यहाँ राउटरहरू, वायरलेस मोडेमहरू, आईपी ठेगानाहरू, र अधिकमा धेरै जानकारीहरू छन् जुन यो टुक्रामा प्रस्ताव गरिएको छ। यस आईपी ठेगानाले तपाईंलाई ब्रॉडब्यान्ड नेटवर्क घरमै कन्फिगर नगरी धेरै समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। आशा छ कि यो तपाइँ सबैको लागि उपयोगी थियो तपाइँको राउटरको नेटवर्क पहुँच गर्नका लागि र यसले निश्चित रूपमा आईपी ठेगानामा तपाइँको जानकारी बढाएको छ।